जेसिबीको बकेटले ठक्कर दिएर वडाध्यक्षको हत्या, दुई जना पक्राउ ! – Sodhpatra
जेसिबीको बकेटले ठक्कर दिएर वडाध्यक्षको हत्या, दुई जना पक्राउ !
प्रकाशित : १२ असार २०७८, शनिबार १९:५८ June 26, 2021
सर्लाही: सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका–३ भक्तिपुरका वडाध्यक्षको हत्या भएको छ । शुक्रवार राति पोखरीको निरीक्षणमा पुगेको बेला जेसीबीले किचेर वडाध्यक्ष श्रेष्ठको हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जानकारी दिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी नायव उपरीक्षक मदन कुँवरले दिएको जानकारी अनुसार शुक्रवार साँझ वडाध्यक्ष लगायत पोखरीको सौन्दर्यीकरणको निरीक्षणमा निस्किएका थिए । उनीहरूले नजिकैको होटेलमा सँगै खाजा खाएका थिए । खाजा खाएर राति फर्किने समयमा जेसीबी चालक हर्क तामाङ र वडाध्यक्ष श्रेष्ठबीच विवाद सुरु भयो ।
विवादकै क्रममा जेसिबी चालक तामाङले जेसीबी चलाएर वडाध्यक्ष श्रेष्ठलाई जेसीबीको बकेटले ठक्कर दिएर लडाए र माटोले पुरिदिए । घटनाबारे जानकारी पाउनासाथ तत्कालै प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुगेर अचेत अवस्थामा रहेका वडाध्यक्ष श्रेष्ठलाई जिल्ला अस्पताल मलङ्गवा पुर्याएपनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको उनले बताए । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा घटनाबारे पूर्व योजना नभई आवेशमा आएर घटना गराएको देखिएको उनले बताए ।
घटनामा संलग्न भएको आरोपमा जेसिबीका ठेकेदार ईश्वरपुर नगरपालिका–३, कै ३५ वर्षीय प्रेमराज दाहाल र जेसिबीका चालक बरहथवा नगरपालिका–१, का ३८ वर्षीय रविन भन्ने हर्क बहादुर तामाङलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
दाहाललाई घटना लगत्तै नियन्त्रणमा लिइएको र फरार रहेका जेसिबी चालक तामाङलाई शनिवार बिहान पौने ६ बजेतिर लालबन्दीबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरू दुवैलाई अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मलङ्गवाको हिरासतमा राखिएको छ । मृतक श्रेष्ठको शव पोष्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल मलङ्गवामा राखिएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ । -प्रशासन डटकम